Horudhac: Newcastle United vs Chelsea… (The Blues oo u safreysa Waqooyi-Bari, iyadoo doonaysa inay sii waddo dagaalkeeda afarta sare ee horyaalka) – Gool FM
(London) 18 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa u safreysa Waqooyi-Bari Ingiriiska, halkaasoo ay kula soo ciyaari doonto Newcastle United, waxaa Blues ay eegeysaa inay sii waddo dagaalkeeda ay ugu jirto afarta sare ee horyaalka Premier League.
Kooxda lagu naanayso Magpies ayaana ku guuldarreysatay inay guulaysato afarteedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka, waxaana ay eegeysaa inay wadada guusha Premier League dib ugu soo laabato caawa.
Dhibaatada dhaawac ee Newcastle United ayaa fududaanaysa, iyadoo weeraryahankeeda Allan Saint-Maximin uu soo laabanayo kaddib muddo bil ah oo uu la maqnaa dhibaato dhanka muruqa ah.
Toddobo ciyaartooy ayaa weli dhaawac ah, Andy Carroll shaki ayuu ku jiraa, laakiin Joelinton iyo Fabian Schar ayaa diyaar ah.
Dhinaca kale koxoda Chelsea ayaan qabin walaac cusub oo dhaawacyo ah, inkastoo N’Golo Kante wali la sii qiimeyn doono dhaawac muruqa ah ee uu sheeganayo.
Marcos Alonso ayaa laga yaabaa inuu safto kulankaan kaddib dhaawac muruqa ah, laakiin Christian Pulisic ayaa weli isagu dhaawac ku maqan.
>- Newcastle ayaa qaadatay kaliya afar dhibcood oo ay ka heshay siddeedeedii kulan ee ugu dambeeyey Premier League oo ay wajahday Chelsea, waxaana ay ka haysataa (1 Guul, 1 Barbaro iyo 6 Guuldarro), iyadoo khasaaro la kulantay saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey weliba si xiriir ah.
>- Chelsea ayaa eegeysa inay rikoor guulo xiriir ah iyadoo marti ah horyaalka Premier League kaga soo gaartay Newcastle United markii ugu horreysay tan iyo guushii 2-0 oo ay ka gaareen labadii xilli ciyaareed ee is-xigay2007-08 & 2008-09.
>- Kooxda Chelsea ayaa kaliya garaacday Tottenham Hotspur oo ka haysata 29 guul inta badan Premier League marka loo eego Newcastle United oo ay ka gaartay 25 guul.
>- Newcastle ayaa khasaaro la kulantay labadeedii kulan ee ugu dambeeyey Premier League oo ay garoonkeeda ku ciyaartay, waxaana laga dhaliyey goolal badan guuldarrooyinkaas, marka loo eego wadar ahaan todobadii kulan ee markaas ka hor ay ku ciyaareen garoonka St James’ Park (5).
>- Afar ciyaaryahan oo kala duwan oo Ingiriis ah ayaa wadar ahaan horyaalka Premier league 20 gool u dhaliyey Chelsea xilli ciyaareedkan, waana markii ugu badnayd tan iyo xilli ciyaareedkii 2012-13 oo ay shan ciyaaryahan oo kala duwan Blues u dhaliyeen 23 gool.